ယိုပူစီနံ - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
သငျသညျလတ်ဆတ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုလိုတဲ့အခါ rate ယိုပူစီနံနွေရာသီအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတော်များများကပူစီနံများ၏အနံ့နဲ့တူလူများ, လက်ဖက်ရည်လာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီသူသက်သေခံဖို့အိမ်နီးချင်းများသို့မဟုတ်ဧည့်သည်များအထင်ကြီးဖို့အခွင့်အလမ်းနေတုန်းပဲရှိသေး၏။ သူတို့ကစာရွက်တောင်းပါလိမ့်မယ် ယိုပူစီနံ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီးအကြောင်းကို၎င်း, ဤဆောင်းပါးကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
ဒါဟာပူစီနံယိုအလွန်ကောင်းတဲ့ကြည့်, တူညီတဲ့ဝန်ခံရပါမည် - စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောတစ်ယူနီဖောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်။ ပြင်ဆင်မှု၏အဓိကနိယာမ - ရေနှင့်အတူမြက်လောင်းသံပုရာပေါင်းထည့်, သကြားနဲ့အနိမ့်အပူပေါ်ချက်ပြုတ်။
အချောထုတ်ကုန်ချက်ပြုတ်ဒါမှမဟုတ်ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကြောင့်ယိုအထူးအရသာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, အဓိကသင်တန်းများမှစပ်မုန်အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်အစဉ်အလာရှိခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ, တစ်ဦးအချိုပွဲအဖြစ် - ကဖွင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သွေးဆောင်မှုပါပဲ။
Peppermint Jam - အကျိုးကျေးဇူးသို့မဟုတ်အန္တရာယ်?
အရသာရှိတဲ့ကျန်းမာယိုပူစီနံအသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိပါတယ်။ ဤသည်အချိုပွဲမကြာခဏခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်, neuralgia ထံမှခံရသောသူတို့အဘို့ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးရိုးရာဆေးတစ်လက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ထုတ်ကုန်ကောင်းလှ၏။ Peppermint Jam ပျို့နှင့် tachycardia အတွက်ကူညီပေးသည်။
အကျိုးကျေးဇူးများပူစီနံကခိုင်မာတဲ့အအေးမိ, ချောင်းဆိုးမှာကူညီပေးသည်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ expectorant ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်အား Jamming ။ ထိုသို့သောအားဖြင့်အပူချိန်ကိုလျှော့ချ Raspberry အဖြစ်ပူစီနံယိုနှင့်အတူလက်ဖက်ရည်။ ယိုကလေးများပေးထားနိုင်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်နှစ်သက်စေကဘာလဲ။ ဤသည်ဆေးဝါးလျင်မြန်စွာသူတို့ကိုအစားအကုန်လုံးဆေးပြားနှင့် Tincture tuck ။ သို့သော်သံပုရာနှင့်အတူတစ်ဦးအသုံးဝင်သောယိုပူစီနံပေးရမပို 3-6 ထက်အနုပညာနိုင်ပါတယ်။ l ။ တစ်နေ့လျှင်။
အဲဒီမှာပူစီနံသာအသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများရရန်ယို၏အသေးဝေမျှဖြစ်သင့်ကြောင်း, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ ထိုအထိုကဲ့သို့သောလည်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ယိုပူစီနံပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်မှုကနေဆငျးရဲခံရသောသူတို့အဘို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဒီကြောင့်သကြားအကြောင်းအရာတစ်ခုအချိုပွဲဖြစ်ပြီး, အလွန်ချိုမြိန်ကတည်းကနှင့်အညီ, သက်ရောက်မှုသေချာပေါက်ပုံမှာပြထားတဲ့လိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ဥပမာ, ကနေဆင်းရဲခံရလျှင်န့်အသတ်ပမာဏယိုပင်, အဝလွန်ခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏ပျက်ကွက်နှိုးဆော်ခြင်းနိုင်ပါတယ် ဆီးချိုရောဂါ ။ ယို၏ menthol အနံ့လုံလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ကြောင်းသတိပြုနောက်ထပ်တန်ဖိုးရှိ။ သင်အချိုပွဲစားရန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်လောက်သတိရကြဘူးလျှင်, အံ့အားသင့်ပေါ်ထွန်းမူးဝြေခင်းဖြစ်ပါဘူး။ အစား, အရာသည်အခြားအချက်, ယောက်ျားရည်ညွှန်းရှိပါသည်။ ဆရာဝန်များပူစီနံလက်ဖက်ရည်မသောက်အကြံပေးနှင့်အထီးအာဏာကိုထိန်းသိမ်းသည်မိမိယိုပူစီနံအစာစားနေကြသည်။
Mint, ထိုသို့ မှစ. ငါတို့သည်ချက်ပြုတ်နိုင်မတစ်ဦးသက်သာစေသောဆေးတစ်ခုလွှမ်းမိုးသောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံကြီးမားသောပမာဏသာရှိပူစီနံယိုအဖြစ်လက်ဖက်ရည်နှလုံးနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အနည်းငယ်သာသိပူစီနံ၏တစ်ဦးချင်းစီသည်းမခံ၏အမှုများကို။ ဒါကြောင့်အရသာရှိတဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်အများစုဖွယ်ရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေ့အထများနှင့်ဆက်စပ်သောအပေါငျးတို့သအားနည်းချက်များ, ယိုပူစီနံနီးပါးဘဏ်များအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။
Rusk - ကယ်လိုရီ
ကိုကိုးအမှုန့် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
မှို - ကယ်လိုရီ
စတော်ဘယ်ရီသစ်တော - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
ပန်းဂေါ်ဖီ - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
Lemonema - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Tom Hanks ၏သားတော်ကို
Tiarella - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
ကလေး3လ - ဖှံ့ဖွိုးတိုးနိုင်ဖြစ်သင့်သလော
မြင့်မားသောခါး 2014 နှင့်အတူအဝတ်
Run လျင်မြန်စွာမီတာ 100 သင်ယူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ယင်းပြတင်းအကောက်အပေါ်ကြီးထွားလာနာနတ်သီး - နာနတ်သီးစိုက်လုပ်နည်း
အကောင်းဆုံးကို option ကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - သားသမီးရဲ့အခန်းကလေးများကက်ဘိနက်ပရိဘောဂ?
Ingalipt - ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်
ပါးလွှာ Brad Pitt "ပျောက်ဆုံးသွားသောစီးတီး Z ကို»၏ Premiere ဆီသို့ရောက် လာ. ,
Courteney ကော့ပြပွဲအစွန်းရောက် "တောရိုင်း vs. က Man" တွင်ပါဝင်ခဲ့ထားပါတယ်